हेटौंडा इजालसले शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा मुछिएका रवीलाई दियो न्याए, सुनायो यस्तो फैसला ! – Etajakhabar
हेटौंडा इजालसले शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा मुछिएका रवीलाई दियो न्याए, सुनायो यस्तो फैसला !
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजालसले शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा मुछिएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र युवराज कँडेलको पक्षमा सुनुवाई गरेको छ । सञ्चारकर्मीद्वय लामिछाने र कँडेलले जिल्ला अदालत चितवनको आदेश विरुद्ध पेस गरेका निवेदनमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजालसले उनीहरुको पक्षमा विहीबार सुनुवाई गरेको हो ।
शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा ‘सीधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका प्रस्तोता लामिछाने र उनका सहकर्मी कँडेल क्रमशः पाँच लाख र तीन लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । यसै प्रकरणमा शालिकरामकी गर्लफ्रेण्ड भनिएकी अस्मिता कार्की ‘रुकु’ भने साधारण तारेखमा रिहा भएकी थिइन् ।
Posted on: Thursday, October 17, 2019 Time: 19:34:18
-11131 second ago
-9267 second ago
-8451 second ago
-7361 second ago
-2213 second ago
-944 second ago